Afganistana: Tovovavy Voapoizina Noho Izy Ireo Nandeha Tany An-tsekoly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2012 6:24 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Ελληνικά, فارسی, বাংলা, Deutsch, Svenska, srpski, Filipino, Aymara, 繁體中文, 简体中文, Italiano, русский, English
Tamin'ny 3 Jona 2012, tovovavy teo amin'ny 65 teo no nirohotra tany amin'ny hopitaly [fa] rehefa avy voapoizina tany amin'ny fianarany tany Takhar faritany Afghan any avaratra atsinanana. Farany amin'ireo andiam-panafihana toeram-pianarana natao ho an'ny tovovavy any amin'ny faritany ity loza ity. Tamin'ny 29 May, teo amin'ny tovovavy 160 teo no niafara tany amin'ny hopitaly taorian'ny fanafihana tamin'ny entona ny sekoliny. Tany amin'ny voalohandohan'ity lohataona ity, maherin'ny tovovavy 270 no voapoizina tamin'ny fanafihana ikendrena ny sekoly tamin'ny toerana roa samihafa. Fanampin'izany, tovovavy anjatony maro nanerana ny firenena no nijaly tamin'ny fanafihana mitovitovy amin'izany tamin'ny herintaona.
Nomen'ny manam-pahefana tsiny tamin'ireto loza ireto ny Taliban. Tsy nahazo niditra an-tsekoly ireo vehivavy teo anelanelan'ny 1996 sy ny 2001, raha nitantana ny ampahany betsaka teto amin'ny firenena ny hetsika fondamentalista. Mbola manohy manasazy ireo mpianatra vehivavy izay mitady fianarana ireo mpiady avy amin'ity hetsika ity sy ireo mpanara-dia azy na dia tovovavy an-tapitrisany aza no nisoratra anarana tany an-tsekoly nanomboka tamin'ny nialan'ny Taliban.
Tovovavy mpianatra mandry tsy mahatsiaro tena eo amin'ny bozaky ny hopitaly ao antampon-tanànan'ny faritanin'i Takhar ao avaratra rehefa avy voapoizina tany an-tsekoly. Sary nalain'i Pajhwok Afghan News, fizakà-manana Demotix (18/04/2012)
Tena mila risi-po be ny ho lasa tovovavy mpianatra any Afghanistana satria mbola mitohy miatrika ny herisetra sy fanafihana mahery vaika ny vehivavy mitady fianarana. Sary nalain'i Teresa Nabais, fizakà-manana Demotix (03/07/2009)
Nandà ny fiampangana azy tamin'ny fanafihana ikendrena sekoly ny Taliban. Na izany aza, tsy dia maharesy lahatra olona loatra izy ireo.
Nanoratra i Ericka M. Johnson, mpitoraka bilaogy avy any Etazonia :
Nanjary lasa fomba fiady mahazatra ny Taliban ny fanafihana toeram-pianaran-jazavavy sy tovovavy mpianatra. Tsy ampy azy ireo ny fitondrana azy ireny ho toy ny fanànana. Mbola mila saziany ihany koa [ny tovovavy] izay te-hianatra. Mandà ny fiampangana azy ireo amin'ny fanafihana izy ireo, saingy ny tantarany manokana ihany — izay nahitana ireo vehivavy tsy mahazo miditra an-tsekoly nandritra ny fitondrana Taliban 1996-2001 — no milaza fa ny vehivavy mahita fianarana dia mizotra mifanohitra amin'ny tombontsoan'ny Taliban.
Mamaly an'i Erica, manazava toy izao ny mpitoraka bilaogy Amerikana hafa Katherine Lorraine, :
Ny fampianarana ny vehivavy no lalana vetivety sy mora indrindra ho amin'ny fitoviana marina eo amin'ny lahy sy ny vavy – ka mazava ho azy ny vondron-dehilahy Taliban rehetra dia tsy mitady afa-tsy ny hanambany ny vehivavy ary ny hanery azy ireo hiaina eo amin'ny sokajy farany ambany indrindra amin'ny rafi-piarahamonina.
Nilaza i Judy Molland, mpanoratra iray nahazo fankasitrahana, hoe:
Ireo izay rehetra mankahàla ankizy ka mahavita manapoizina azy dia mazava ho azy fa efa very ny fo mahaolombelona azy. Tokony hataon'ny governemanta Afghan laharam-pahamehana aloha ny fiarovana ny mpianatra mba ho an'ireto tovovavy.
Manoratra [fa] toy izao ny mpitoraka bilaogy Afghan Hussain Ibrahimi :
Namoaka fomba hafa amin'ny ady ifanaovany amin'ny governemanta [an'ny firenena] ny fahavalon'i Afghanistan ankehitriny. Ity fomba fiady ity dia ny fanapoizinana sekolin-jazavavy, mba hikendrena ny hanakatonana ireo rafi-pampianarana rehetra any amin'ny faritany samihafa… Tena mety hamotika be mihitsy ny fahombiazana azo ampolo-taonany ity zavatra ity toy ny hoe fanokafana sekoly vaovao taorian'ny nianjeran'ny fitondrana Taliban
Ho an'ny olona sasany, dia antony iray tokony hijerena indray ny fitondrana ny fampianarana ireo tatitra azo avy amin'ny fanafihana ikendrena sekoly any Afghanistan ireo. Milaza i Dineeta Kubhar hoe:
@WordsOfDineeta: Poizinin'ny Taliban ny rano fisotron'ny vehivavy any an-tsekoly mba hanajanonana azy ireo amin'ny fianarana. Ary izaho ity mitaraina amin'ny fianarana smh.
Manahy ireo mpampiasa aterineto fa aorian'ny fialàn'ireo andian-tafika vahiny tarihan'ny OTAN amin'ny taona 2014, angamba dia vao maika ho henjana kokoa ny fampitahoran'ny Taliban sy ireo fondamentalista hafa ny tovovavy amin'ny fianarana.
Nanoratra i Chloe Logan, mpamatsy vaovao an'i Yahoo:
Raha mbola mitohy ireny fanafihana ireny na any Afghanistan aza ny herin'ny OTAN, dia manontany tena izahay raha mbola hijanona hanam-pahasahiana ihany ny tovovavy hanatrika ireo fianarany rehefa lasa ny mpiaro azy. Fantatsika fa ny hoavin-dry zareo dia miankina amin'ny fianarana tsy ampy tamin'izy ireo.
Manisy sira ny mpitoraka bilaogy hafa, Jan, :
Indrisy, raha vao miala any Afghanistan “amin'ny fomba ofisialy” ny tafika Amerikana, dia hainao, haiko, ary haintsika rehetra, inona no hanjo ireo tovovavy afghani izay sahy mandeha mianatra, ary koa ireo vehivavy Afhani te-hampianatra, ireo mpitsabo mpanampy any amin'ny hopitaly, na ireo te-hiasa ho mpitantsoratra, na ho mpanampy any amin'ireo tranobe fivarotana enta-madinika, na manandrana miditra amin'ireo ekipa amin'ny lalao Olympika, na milalao badminton na echec; na mianatra mamaky teny sy manoratra…